musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Al Qaeda, Islamic State pachinangwa chekuuraya muMalian Venice Dunhu reMopti
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Vadivelu Comedy Breaking News • nhau • chengetedzo • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Vanhu makumi matatu nevaviri vasina mhosva vaive mubhazi reruzhinji muMopti, Mali vakavigwa nezuro.
Misha yeMopti iri kuWest Africa Nyika yeMali inozivikanwa seimwe yenzvimbo dzinoshamisa uye dzine ruvara rwenyika. Iye zvino ndiyo imwe yenzvimbo dzakafa muMali.
Mopti,” Venice yeMali,” ndiro guta guru renharaunda yechishanu. Ichi chitsuwa chine chimwe chezviteshi zvakabatikana zvikuru paRwizi rwaNiger. Ndiyo nharaunda yetourism par excellence.
Nharaunda iyi inonyunguduka, inoumbwa nemarudzi akasiyana-siyana anogarisana. Mitauro yakajairika munharaunda iyi inosanganisira Fulani, Bambara, Dogon, Songhai, uye Bozo.
Tourism yaimbova indasitiri inosimukira neAir Mali ichibhururuka kuenda kuMupti kubva kuTimbuktu neBamako, uye mabhazi ekushanyira anotora nzira ine mavara kubva kuMupti kuenda kuguta guru reBamako.
Dunhu iri parizvino rave nzvimbo yemhirizhonga muMali inokurudzirwa nevapanduki vane hukama neal Qaeda neIslamic State.
Nezuro, Mauto akauraya vanhu vanosvika makumi matatu nevaviri pakati peMali neChishanu pavakapfura bhazi raiendesa vanhu kumusika weko, zviremera zvenzvimbo zvakati - kurwisa kwazvino kunouraya munharaunda yava kuzivikanwa uye inotongwa nechisimba. Bhazi rakarwiswa nevasina kuzivikanwa nepfuti sezvo raifamba nzira yaro kaviri pasvondo kubva mumusha weSongho kuenda kumusika muBandiagara, makiromita gumi (31 mamaira) kubva. Varume vaiva nezvombo vakapfura motokari, vakatema matayi, uye vakapfura vanhu.
Mali ndiyo inonyanya kupihwa muWorld Heritage nzvimbo muAfrica. Mamosque Djingary Ber neSankore muTimbuktu, Iyo mosque yeDjenne, Dogon Nyika, Guva reAskia muGao, uye Jaaral neDegal muDiafarabe neDialloube ese akacherechedzwa nenyika dzepasirese kuburikidza nekubatanidzwa muUNESCO World Heritage.
Idzi nzvimbo dzine mukurumbira dzetsika dzakawedzera kumatunhu akaisvonaka, nharaunda nemisha inoyevedza uye ine mavara, uye nechepakati Niger Delta nechivako chayo chevhu nenzvimbo dzayo dzeRamsar dzinogamuchira gore negore zviuru zveshiri dzomumvura, gwenga reSahara rine runako, mune dzimwe nzvimbo, mufaro. inokura paunofamba nenyika.
Nechinzvimbo chayo, nhoroondo, uye tsika, Mali yaive nyika yekushanya uye yakanangana nehunyanzvi.
Mali ine hupfumi hwetsika uye nyika inopemberera Mhemberero dzakasiyana gore rose munzvimbo dzakasiyana: mitambo yetsika, mitambo yemimhanzi, mitambo yechitendero, panguva iyo maforamu ehurukuro akarongwa nekubatanidzwa kwevatorwa kubva kumakondinendi ese.
Embassy yeUS inoyambira: Usaende kuMali nekuda kwehutsotsi, hugandanga uye kupamba.
Ned Price, mutauriri weDhipatimendi reUnited States akati: United States inoshora zvakasimba kurwiswa kwevanhuwo zvavo neMugovera pedyo neBandiagara, Mali, iyo yakasiya makumi matatu nevaviri vakafa uye gumi nevanomwe vakakuvara. Isu tinopa runyaradzo rwedu rwakadzama kuvanhu veMaliya uye ticharamba tichibatana navo mukutsvaga kwavo ramangwana rakachengeteka, rakabudirira, uye regutsaruzhinji.